देउवा सरकारलाई स्थायी बनाउन लागौं : डा.भट्टराई - Dainik Online Dainik Online
देउवा सरकारलाई स्थायी बनाउन लागौं : डा.भट्टराई
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७८, आइतबार ९ : २०
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालते संवैधानिक अंगका सबैको भुमिका स्पष्ट पारिदिएकोले आफ्नो भुमिकामा जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यले समेत आफ्नो भुमिका बारे स्पष्ट नभएको भन्दै सर्वोच्चले सबैको भुमिकालाई स्पष्ट पारिदिएको बताउनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले सुन्दर ढंगले संवैधानिक व्याख्या गरेर संविधानलाई बचाएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो–‘प्रतिनिधि सभा र यसका सदस्यहरुले सायद हाम्रो शक्ति चिनेको छैनौँ । अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालय हुँदै प्रतिनिधि सभा, सभामुखसमेतको अधिकार क्षेत्रको, कर्तव्यको त्यहाँ मूल्यांकन गरिएको छ । दिशानिर्देश गरिएको छ। व्याख्या गरिएको छ । हामीले आफैले लेखेको संविधान आफैँ विर्सिएको थियौँ । यो प्रतिनिधि सभा सबैभन्दा उच्चतम थलो हो।’
प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर देशलाई अध्यारो सुरुङभित्र हाल्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै उहाँले दुर्घटनाबाट बचेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो संविधान अपूर्ण भएपनि अग्रगामी भएको भन्दै उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘यो संविधान विगतका सबै संविधान भन्दा अग्रगामी संविधान छ। अपूर्ण छ अपुरो छ तर अग्रगामी छ। त्यसैले यसलाई अवमुल्यन नगरौँ।’
प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाबाट पाठ सिक्दै गल्ती दोहो¥याउनु नहुने डा. भट्टराईको भनाई छ।
प्रतिनिधि सभालाई जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारलाई स्थायी सरकार बनाउन र लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाउन उहाँले आव्हान गर्नुभएको छ।